Ciidanka Kenya oo bilaabay in ay Nolosha ku toogtaan Maleeshiyaadkii dhawaan loo tababaray Kooxda Riddada oo baxsad soo ahaa. | Halganka Online
Ciidanka Kenya oo bilaabay in ay Nolosha ku toogtaan Maleeshiyaadkii dhawaan loo tababaray Kooxda Riddada oo baxsad soo ahaa.
Ciidamada Saliibiga Kenya ayaa bilaabay in ay toogasho ku dilaan Maleeshiyaad Soomaali ah oo dhawaan lagusoo Tababaray gudaha dalka Kenya si ay ciidan ugu noqdaan kooxda Riddada.
Ilo lagu kalsoonyahay ayaa Idaacadda Islaamiga Andalus u xaqiijiyay in Ciidamada Saliibiga Kenya ay gobalka Waqooyi Bari ku khaarijiyay Sedax Nin oo doonaysay in ay soo baxsadaan.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay arkeen Maydadka dhalinyarada latoogtay oo yaal wadada isku xirta Gaarisa iyo Wajeer, toogashada ayaa dhacday markii maleeshiyaadka ladilay ay isku dayeen in ay kasoo baxsadaan xero ay Tababar ku qaateen oo ay ku sugnaayeen.
Maleeshiyaadka Kenya lagusoo tababaray ayaa dhibsaday howsha ciidamaynta ah ee ladoonayo in lagu dagaal geliyo iyagoo maanka ku haya in Somaliya ay ugasoo horeeyaan Mujaahidiinta Shahaadda raadis ah oo Nolosha ku Gowracaya.
maalmihii lasoo dhaafay ayay wilaayaadka Islaamiga Gedo iyo Jubbada Hoose iska dhiibayeen Maleeshiyaad megengelyo doon ah oo u adkaysan waayay dhibaatada ay Kenya ku hayso.
« Gaalada Caalamka oo ku guul daraysatay xalinta Khilaafka u dhexeeya Hogaanka Kooxda Riddada ee Muqdisho ku sugan. Dagaal xoogan oo hub fara badan lagula wareegay ayaa saakay ka dhacay duleedka magaalada masagawaay ee gobalka G/galgaduud. »